बि.सं.२०७७ साल मंसिर १४ गते आईतबारको राशिफल । - Saitim Khabar
१४ मंसिर २०७७, आईतवार ०७:३०
बि.सं.२०७७ साल मंसिर १४ गते आईतबार ई. सं. २०२० नोभेम्वर २९ नेपाल सम्बत ११४१ कछलाथ्व चतुर्दशी, प्रमाधि नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी, चन्द्रमा मेष राशिमा १०ः१५ मिनेट सम्म त्यसपछि वृष राशिमा गोचर गर्नेछन् । कृत्तिका नक्षत्र, परिधि योग १०ः २० मिनेट सम्म त्यसपछि शिव योग, वणिज करण । नेपालमा सूर्योदय बिहान ०६ः३६ बजे, सूर्यास्त साँझ ५ः९ बजे हुनेछ । आज जन्म लिने बच्चाको मेष राशि हुनेछ । आज महत्वपूर्ण कार्यका लागि बाहिर निस्कनु पर्दा घीउ खाएर जुनसकै दिशाको यात्रा गरेपनि शुभ फल प्राप्त हुनेछ । आज कनैपनि महत्वपूर्ण कार्य तथा दिवश परेको छैन । आज कुनै महत्वपूर्ण कार्यको शुरुवात वा शुभ यात्रामा निस्कन आजका लागि शुभ समय बिहान ९ बजरे १४ मिनेट देखि ११ बजेर ५२ मिनेट सम्म छ ।
मेष(चु,चे,चो,ला,लि,लु,ले,लो,अ)रमाईलो यात्राको समय रहेको छ । अवसरहरु थुपै आउनेछन । खानामा बिशेष ख्याल गर्नुहोला । आफन्तको सल्लाह सुझाव अनुसार अगाडि बढनुहोला । सरकारी कार्यमा ढिलाई हुने समय रहेको छ । तपाईको कमजोरी माथि अरुको टिप्पनी आउने छ । आफन्त सग भेटघाट बढने समय छ ।
वृष(इ,उ,ए,,ओ,वा,वि,वु,वे,वो)व्यापार व्यवसायमा सफलता मिल्नेछ । छेनिक फाईदाका पछाडि लाग्दा कार्यमा ढिलाई हुने समय रहेको छ । नयाँ कामको थालनी गर्नुभन्दा पहिले सोच बिचार गरेर अगाडि बढनु होला । कार्यमा दौडधुव बढने देखिन्छ । आफन्त बाट टाढिने समय रहेको छ । हतार बाट कार्यमा बाधा रहने छ ।
मिथुन(क,कि,कु,घ,ङ,छ,के,को,ह)आम्दानीका क्षेत्रहरुमा वृद्धि रहनेछ । परिश्रमको उचित प्रतिफल मिल्ने समय रहेको छ । व्यापार व्यवसाय गरेका लाई ठिकै रहनेछ । बिगतमा रोकिएका कामहरु सजिलै बन्ने समय रहेको छ । भौत्तिक सामाग्रीहरु जोडने समय छ । पार्टर बाट पनि लाभ लिन सकिने भएको हुँदा अवसरलाई चिन्नु होला ।
कर्कट(हि,हु,हे,हो,ठा,डि,डु,डे,डो)कार्यमा भेटघाट बढने समय रहेको छ । तपाईको मेहनत बाट कार्यमा सफलता लिन सकिने समय रहेको छ । अरुलाई प्रभाव पारेर अगाडि बढने समय रहेको छ । सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील हुने दिन रहेको छ । पैत्तिक सम्पत्ति बाट लाभमय समय रहेको छ । व्यापार व्यवसाय गरेका लाई ठिकै छ ।
शिंह(मा,मि,मु,मे,मो,टा,टि,टु,टे)कार्यको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने समय रहेको छ । आफनो कामको अवसरको लागि लागि केहि जटिलता आउनेछ । आफनो सोखको क्षेत्रमा खर्च गर्ने समय रहेको छ । समय लाई चिन्ने प्रयास गर्नुहोला । सोचेको कार्यमा बाधामय समय रहेको छ । आफनो भन्दा अरुको कार्यमा समय दिर्नुपर्ला ।
कन्या(टो,प,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो)अरुको काम भन्दा आफनो कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सकिने समय छ । आजको परिश्रम बाट तत्काल फाईदा नभए पनि भोलिको लागि फाईदा हुने समय छ । समय परिस्थितिले अनुकूल भन्दा प्रतिकुल दिदा मनमा चिन्ता बढने देखिन्छ । अवसहरु थुपै आउनेछन तर अवसर लाई प्रयोग गर्नुहोला ।
तुला(रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तु,ते)घर परिवारको साथ र सहयोगले कार्यमा सफलता मिल्ने समय रहेको छ । आफनो रोजगार व्यापार व्यवसायमा ठिकै रहने समय रहेको छ । भौत्तिक सामाग्री जोडने समय रहेको छ । वादविवादमा नफस्नु होला । समय परिवेश तपाई अनुकुल रहनाले मनमा खुशी छाउला । आफनो मान प्रतिष्ठाको लागि ठिकै छ ।
वृश्चिक(तो,ना,नि,नु,ने,नो,या,यि,ये)तपाईको मेहनत बाट रामै प्रतिफल प्राप्त रहने समय रहेको छ । समस्याहरु लाई हल गदै अगाडि बढने समय रहेको छ । बिगतमा रोकिएका कामहरु बन्ने समय रहेको छ । शत्रुहरु तपाई बाट डराउने समय रहेको देखिन्छ । व्यापार व्यवसायमा लाभमय समय रहेको छ । समस्या समाधान हुने देखिन्छ ।
धनु(य,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढ,भे)स्वास्थयका लागि खानामा बिशेष ख्याल गर्नुहोला । समय लाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा केहि प्रतिकुलता रहने देखिन्छ । तपाईको कार्य क्षेत्रमा अरुले अधिकार जमाउन खोज्नेछन । अध्ययन अध्यापनमा समय मिलाउन नसकिएला । तपाईले सोचे अनुसार आज नै काम बाट लिन नसकिएला ।
मकर(भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खि,खु,खे,गा,गी)समय लाई चिन्ने प्रयास गर्नुहोला । आफन्तहरु टाढिने समय रहेको छ । तपाईको मिहिनत बाट अरु लाई फाईदा हुने समय छ । आफन्तको सहयोगको आशा राख्दा समस्या आउने समय रहेको छ । बोल्दा विचार गरेर बोल्नु होला । दैनिक कार्यलाई निरन्तरता दिदा सफलता कारक मानिन्छ ।
कुम्भु(गु,गे,गो,सा,सी,सु,से,सो,द)तपाईको मिहिनतको फल अवश्य प्राप्त रहने समय रहेको छ । तपाईको प्रयास बाट अवसर प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ । आफन्तको साथ र सहयोग जुटने समय रहेको देखिन्छ । आज भन्दा भोलिको लागि फाईदा हुने कार्यमा लाग्ने समय रहेको छ । विगतमा रोकिएका कामहरु बन्ने समय रहेको छ ।
मीन(दी,दू,थ,ज,ञ,दे,दो,चा,ची)काम गर्दा हतार नगर्नु होला । आफनो नजिक आएको अवसर प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नुहोला । तपाईको वोलिको फरक अर्थ लाग्ने हुँदा कार्यमा समस्या रहेको देखिन्छ । अध्ययन अध्यापनमा समय दिन नसकिएला । आफनो अभिव्यक्ति राख्न केहि समय प्रतिक्षा गर्नुहोला । समय परिस्थिति सग जुटने प्रयास गर्नुहोला ।